29 novembre 2013 - Page 4 sur 4 - Midi Madagasikara
Ambohibao – Andranoro : Olona 6 nianjeran’ny trano, voatsindry nandritra ny adiny dimy
Redaction Midi Madagasikara 29 novembre 2013 Ambohibao, Andranoro, nianjeran’ny trano
Atahorana mafy ny ain’ny anankiroa amin’ireo naratra. Nirodana omaly ny ampahany tamina trano lehibe iray, izay vao eo andalam-panamboarana etsy Ambohibao – Andranoro. Mpiasa fito lahy no indray voatsindrin’ilay ampahan-drindrina « béton » tao, saingy nalaky tafavoaka ny iray. Ireo ambiny kosa tavela tao ka naharitra adiny 5 ny fisokirana azy ireo tao. Tokony ho tamin’ny 2…